iinkqubo zokunkcenkceshela ezifama ngeendlela ezahlukeneyo
Kuba iinkqubo zokunkcenkceshela ziyinxalenye ebalulekileyo yokulima kwale mihla, zininzi iinkqubo ezahlukeneyo zokunkcenkceshela ezifama ukwenza oku. Ngofakelo oluchanekileyo, kunokwenzeka ukugcina iihektare zamasimu angenamda, nokuba zikude kuwo nawuphi na umthombo wamanzi okanye ukuba imvula ayanele. nazi 4 Iinkqubo ezahlukeneyo zokunkcenkceshela ezifama 1. Ukunkcenkceshela ngoNogumbe, 2. Sprinkler Irrigation,3. I-Drip Irrigation,4. Unkcenkceshelo oluncinci,namhlanje sithetha kakhulu ngenkcenkceshelo yokuntywila kunye nokunkcenkceshela
Ukunkcenkceshela i-Drip kubandakanya ukusetyenzwa kwe-tubing encinci ye-polyimita nge-emitters kwaye isetyenziselwa ukufaka amanzi kwindawo encinci ngqo kwindawo yengcambu yesityalo. Iimpawu ezimiselweyo zingafakelwa ityhubhu ngesandla sokuhambisa amanzi umthi okanye isityalo esithile. Isetyenzisiwe kukubethelwa kwe-emitter okuye kukhuphe ii-emitters ezifakwe kumzi-mveliso kwindawo ethile yokunciphisa iindleko. Iinkqubo zedrophu zingafakelwa ngaphezulu komhlaba okanye zingcwatywe ukunciphisa umonakalo kwisicabhu. Iteyiphu yedrip luhlobo lokunkcenkceshela oluye lwadonsa lufakelwe kumbhobho omncinci kakhulu othunyelwe kufutshane nekhoyili okanye iiroli.. Izinto ezikhutshelweyo zigadwe ukusuka 6 ukuba 12 i-intshi ngokwahlukeneyo. Iteyiphu yedrophu idla ngokusetyenziselwa ukunkcenkceshela izityalo zemifuno kunye nezitiya kodwa zingangcwatywa ukunkcenkceshela izityalo ezifana nekotoni okanye umbona.
Ukunkcenkceshela Sprinkler kunokusetyenziselwa ukunkcenkceshela amasimi ngobuninzi bawo, ithambeka, okanye ubume. Uluhlu olungezantsi zindlela ezahlukileyo zokutshiza zisetyenziswa kwiinkqubo zokunkcenkceshela kwifama ukusasaza amanzi ngaphezulu kwentsimi.
Isongezo soMpu wesandla -I-Sprinklers ziqhotyoshelwe esiphelweni senxalenye engamashumi amathathu okanye amashumi amane eenyawo zealuminium okanye ipayipi yePVC.. Le mibhobho ifakelwe ukuphela ukuze iphelise umqolo okanye icandelo lomhlaba kwaye libizwa ngokuba li-kamva. Izinto ezisecaleni zihlala zibekwa malunga neemitha ezingamashumi amane ngokwahlukana.
Ukuseta okuzinzileyo-Umbhobho osisigxina wangaphantsi komhlaba kwePVC ufakelwe kumhlaba wonke apho izinyuko ziphuma kubo ngesityibilikisi esifakwe ngaphezulu. Izithuba phakathi kwezitshizi zingaba ngamashumi amane ukuya ngaphezulu kweenyawo ezilikhulu kuxhomekeka kubungakanani kunye nodidi lwesitshiza olusetyenzisiweyo.
Izitshizi zeZiko okanye ezinye iiNkqubo zoMatshini zokunkcenkceshela-Izixhobo zokucoca amanzi kule ndlela yokunkcenkceshela zifakwe kumatshini umiswe kumatshini oqinileyo okanye wethontsi. Zihlala zifakelwa nje ngaphezulu kwesentla kodwa zibekwa kufutshane nomhlaba zeenkqubo zonkcenkceshelo zeefama.
I-Hose Reel okanye iiNkqubo zeeGun eziHambisayo- Isitshizi esinye esikhulu sifakwe kwinqwelwana efakwe kwihose kwi-reel enkulu. Inqanawa iqhagamshelwe kwitrektara kwaye idilizwe kumhlaba ukuze usete, Ukuphelisa i-hose ukusuka kwi-reel. Xa amanzi ebaleka kwinkqubo, umnyibilikisi uyasebenza kwaye ujikeleze iseli, ukuhambisa umoya kwi-hose kunye nokutsala isitshizi kunye nenqola ngaphakathi.